Seducing Mr. Perfect ( 2006 ) - Myanmar Asian TV
Seducing Mr. Perfect ( 2006 )
ကဲ ….. ဒီ တစ်ခါမှာတော့ MMATV Channel ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်များအတွက် စိတ်အပမ်းပြေစေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ….
ဒီကားလေးကတော့ December -7 , 2006 ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ romance/comedy ရုပ်ရှင် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး title ကတော့ “Seducing Mr.Perfect” ဖြစ်ပါတယ် …
Screen writer & Director အဖြစ် Kim Sang-Woo က တာဝန်ယူထားပြီး ကိုးရီးယား မင်းသမီး Uhm Jung-hwa နဲ့ အမေရိကန် ကိုးရီးယား မင်းသား Daniel Henney တို့က ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လိုက်ဖက်ညီစွာ သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ် …
ရုပ်ရှင် ကြာမြင့်ချိန်က 107 မိနစ်ရှိပြီး Sidus FNH ကထုတ်လုပ်ကာ Lotte Entertainment ကနေဖြန့်ချီထားပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စပ်စလူးစိန် ဓာတ်ဗူးပိန်မမ Min-June ဟာ သူမဘဝမှာ အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေနေပေမယ့် ချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ ထားခဲ့တာကိုပဲ ခံနေရပါတယ် … သူမရဲ့ Boss ဖြစ်တဲ့ Mr.Perfect ခေါ် Mr.Robin ကတော့ အချစ်စစ်ဆိုတာကို အယုံအကြည်မရှိသလို အချစ်ဆိုတာ အားပြိုင်ပွဲလို့ပဲ မှတ်ယူထားတဲ့ … အချစ်နဲ့ပတ်သတ်လို့လဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ idea ရှိသူတစ်ယောက်ပေါ့ …
ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင် ပုံစံ နဲ့ ခံယူချက်ချင်း မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကြားက အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ရယ်လို့တစ်ဖုံး ပြုံးလို့တစ်မျိုး ရှုစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Translator : AyePwint Min
Actors: Baek Do-bin, Daniel Henney, Kim Ki-hyun, Lee Sung-min, Ok Ji-young, Park Hyun-young, Uhm Jung-hwa
Openload.co Myanmar 850 MB Download Soliddrive.co Myanmar 850 MB Download
Born to Love You ( 2012 )
2012 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီး Fancy Drama ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ရသအမျိုးမျိုးပါပေးစွမ်းမှာပါ … အဓိကဇာတ်ဆောင် ရစ်ဒ်အဖြစ် နာမည်ကြီး Coco Martin က အချစ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ထင်ရာ လုပ်တဲ့ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ထားပြီး … အဓိကမင်းသမီးနေရာမှာတော့ ဂျိုဝီအဖြစ် Angeline Quinto ကိုတွေ့ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း – အချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့စကားပြန်ကောင်မလေးနဲ့ အချစ်ကိုမုန်းတီးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလေးတို့ ကိုရီးယားကိုသွားရောက်ရင်း ဘယ်လို Romantic လေးတွေဖြစ်လာမလဲ ပေါင်းစည်းမှာလား…
The Princess and the Matchmaker ( 2018 )
ကဲ အိုဂုံပရိသတ်တွေအတွက် အိုဂုံရဲ့ 2018 Feb 28 မှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်လေး လာပါပြီနော်…. ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့ romantic comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDB 6.1/10 Asian Wiki user rating 93% ရထားတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးပါ…. ဒါ့အပြင် မင်းသားချောလေးတွေဖြစ်တဲ့ Le Seung-gi Yeon Woo-jin Kang Min…